समर्थकबाट रुचाइएका अल्मुताइरीको नेपाल भविष्य के होला ? | Nepal Ghatana
समर्थकबाट रुचाइएका अल्मुताइरीको नेपाल भविष्य के होला ?
प्रकाशित : ८ असार २०७९, बुधबार २३:२९
मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी नयाँ कार्यसमितिसँग काम गर्न इच्छुक
फर्किएलान् त अलमुताइरी नेपाल ? विवादपछि के हुने हो भन्ने कौतुहलता फुटबल समर्थकमा !
जोर्डनलाई रोक्ने नेपालको योजना